Ny mpitsara any Skotika dia nanary ny fanambin'ny klioban'ny alim-pandihizana ho pasipaoro COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Scotland » Ny mpitsara any Skotika dia nanary ny fanambin'ny klioban'ny alim-pandihizana ho pasipaoro COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Entertainment • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Music • Vaovao • People • Vaovao farany momba an'i Scotland • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Eo ambanin'io tetik'asa io, ny toeram-pialan-tsasatra sasany any Ekosy, ao anatin'izany ny clubclub, hetsika an-trano tsy misy seza misy olona mihoatra ny 500, fotoan-dehibe miaraka amina mpanatrika mihoatra ny 4,000 ary izay hetsika misy mpitory mihoatra ny 10,000, dia tokony hanamarina fa vita vaksinin'ny COVID ny olona rehetra mihoatra ny 18 taona. -19.
Ny fikambanan'ny Night Time Industries, Scotland dia nitaky ny hanakanana ny rafitra pasipaoro vaksiny COVID-19 vaovao.
Ny mpitsara any Skotika dia mamoaka didy manohitra ireo mpangataka, milaza fa azon'ny governemanta ekena ny fampiharana ny tetika.
Ny fikambanana Night Time Industries Association, Scotland dia nanakiana ny hetsika ho "fanavakavahana" amin'ireo toerana sasany.
Ny mpitsara mafana, Lord David Burns, androany dia nandà ny fanamby ara-dalàna amin'ny rafitra pasipaoro vaksinin'ny COVID-19 any Skotlandia, izay mamely ny fitoriana napetraky ny Fikambanan'ny orinasa miasa amin'ny alina, Ekosy izay nitady hisorohana ny fepetra tsy hanan-kery.
Tamin'ny didim-pitsarana navoakany dia nanapa-kevitra ny Lord David Burns manohitra ny fanambaran'ireo mpangataka fa ny rafitra dia “tsy mifandanja, tsy mandanjalanja na tsy mitombina” na fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Araka ny didim-pitsarana navoakan'ny mpitsara, ny tetika dia latsaka tao ambanin'ny zavatra azon'ny governemanta ekena hatao ho valin'ny areti-mifindra ary izany dia "fikasana hamaha ireo olana ara-dalàna voamarina amin'ny fomba voalanjalanja".
Nilaza ihany koa ny mpitsara fa io rafitra io dia iharan'ny fanaraha-mason'ny parlemanta sy ny minisitra, izay manana adidy amin'ny lalàna mba hanala ireo fitsipika izay tsy takiana intsony mba hiarovana ny fahasalamam-bahoaka.
Queen's Counsel (QC) Lord Richard Keen, ny mpisolovava misolo tena ny Fikambanan'ny orinasa miasa amin'ny alina, Ekosy, nanameloka ny fandraisana andraikitra ho "fanavakavahana" amin'ireo toerana sasany ao amin'ny Fitsarana Session, ary nilaza fa tokony harovana ny "zo ara-dalàna fototra" an'ny mpangataka.
Raha niresaka momba ny governemanta skotika i QC James Mure dia nametraka fa ny tetika dia noforonina rehefa voadona mafy ny National Health Service (NHS) vokatry ny areti-mandringana. Araka ny voalazan'i Mure, ny rafitra dia mitady ny hitazomana ny toerana malalaka izay mety hampidi-doza kokoa amin'ny fandefasana ary koa mandrisika ny olona ho tonga hanao vaksiny.
Eo ambanin'ilay tetika, azo antoka ScotlandNy toeram-pialan-tsasatra, ao anatin'izany ny clubclub, hetsika an-trano tsy misy seza misy olona maherin'ny 500, fotoan-dehibe miaraka amin'ny mpanatrika mihoatra ny 4,000 ary izay hetsika misy mpitory mihoatra ny 10,000, dia tokony hanamarina fa ny olona rehetra mihoatra ny 18 taona dia vita vaksiny fanoherana ny COVID-19.
Nilaza ny governemanta Scottish fa nanome orinasa roa voakasik'izany hatramin'ny roa andro hanatanterahana ny tetika, izay manomboka amin'ny zoma, "mba hizaha toetra, hampifanaraka ary hananganana fahatokisana ny fandaminana azo ampiharina" takiana alohan'ny hampiharana azy amin'ny 18 Oktobra.
Raha ny antontan'isa nataon'ny governemanta UK dia 92% ny skoto no nahazo vaksinim-pananahana voalohany, raha maherin'ny 84% kosa dia voafitaka indroa.